Fangatahana processeur Cannabis Pennsylvania | PA Hemp Processors
Fampiharana momba ny angovo any Pennsylvania
Ny fangatahana mpitrandraka rongony ho an'ny Pennsylvania dia misy ambaratonga roa samy hafa ary olona iray ihany no manana izany fahazoan-dàlana hikirakira rongony izany. Fampiharana processeur hemp PA.
Ahoana no fomba fangatahana ny Fahazoan-dalan'ny Processor Cannabis Processor
Pennsylvania Application Processor Cannabis
Amin'ny maha processeur hemp PA anao dia mety hahazo fahazoan-dàlana amin'ny fikarakarana rongony any Pennsylvania ianao. Azo atao ny manodina rongony raha tsy amin'ny The Fivoriambe ankapobeny ao amin'ny fitsipika momba ny Commonwealth of Pennsylvania. Ity no ilaina ahazoana manangana processeur ara-dalàna.
Voalohany indrindra dia ilaina ny manonona izany fa ny hetsika izay misy Lalàna Pennsylvania ampidiro ny fitsipika sasany izay tsy mihatra amin'ny fanjakana hafa. Noho izany dia ilaina ny manangona sy manatitra ireo antontan-taratasy izay tsy misy ifandraisany amin'ny fahefan'i Pennsylvania.
Inona no ilaiko amin'ny Application Processor Cannabis Processor?
Ny mpangataka rehetra dia mila manome fanazavana sasany hanombohana dingan'ny rindranasa. Ny governemanta dia manome soso-kevitra amin'ireto fepetra takina ireto izay tsy maintsy tanterahina:
• Aoka ianao ho olona tsy manana tombotsoan'ny orinasa mihoatra ny iray. Ny fahalianana dia tsy natao hitranga sa tsy hahalala. Voarara ny miasa sy hizara rongony miaraka amina olon-kafa izay mety miditra amina tanjona
• Mandefasa fangatahana fangatahana taratasy mitentina 1,000 1,000 $ amin'ny departemanta. Fahazoan-dalana Tier A processor dia azo havaozina isan-taona amin'ny vidin'ny fanavaozana $ XNUMX
• Mandefa fangatahana sy sarany fangatahana $ 30,000 ho an'ny Fahazoan-dàlana processeur Tier B PA. Ny fahazoan-dàlana dia azo havaozina isan-taona amin'ny fanavaozana $ 30,000
Inona avy no tombontsoa ananako amin'ny alalàn'ny Processor cannabis any Pennsylvania?
Mitovy amin'ny Prosesoran'ny tsiranoka any Pennsylvanian, mety manana tombontsoa sasany ianao izay misy:
• Fahazoana fanamarinana volafotsy, volamena na platina ho an'ny tranobe ampiasaina amin'ny asa sahanina. Ny fanamarinana dia ampahany amin'ny rafi-pitantanan'ny Filan-kevitry ny fananganana maoderina amerikana maoderina sy ny famolavolana maoderina.
• Mahazo Globes roa, telo na efatra eo ambanin'ny Green Rating Initiative an'ny Green Globes Green Building Rating System
• Avela hividy ganagana amin'ny mpamboly sy mikrograma izay manana fahazoan-dàlana sy fahazoan-dàlana ilaina rehetra
• Mivarotra rongony ho an'ny dispensaries
Inona no fetra ampiharina amin'ireo mpikirakira PA Hemp
Anisan'ny fangatahana ho lasa prosesor de cannabis any Pennsylvania, azo ampidirina amin'ireto fetra ireto ireto:
• Ireo mpikarakara rehetra izay mitana Fahazoan-dàlana Tier A Processor dia afaka mividy hatramin'ny rongony 25 kilao amin'ny vidin'ny varotra. Ny vola dia fehezin'ny departemanta ary io dia mivoaka isan-taona isan-taona amin'ny fividianana rongony
• Ny mpikarakara rehetra izay mitana Fahazoan-dàlana Tier B dia afaka mividy ambioka isan-taona raha tsy efa manova ny fetra ny departemanta.
Inona avy ireo adidiko amin'ny maha-mpamokatra otrikaretina?
Rehefa lasa prosesor de cannabis ianao dia mety manana andraikitra izay mifanaraka amin'ny fitsipika Pennsylvanian ofisialy. Iray amin'ireo fitsipika voalohany indrindra ny mitazona ny faritra iasan'ny orinasanao. Zava-dehibe ny manana rafitra fanaraha-maso sy ny fananana fiarovana tsara izay manampy fiarovana bebe kokoa amin'ny orinasa.
Raha mpandefa ianao mitazona Fahazoan-dàlana amin'ny Tier hitandrina ny protocols fiarovana farany izay natao hanakanana ny fanararaotana tsy ara-dalàna. Ny protocols dia fehezin'ny rafi-pitsarana ofisialy.
Raha toa ianao dia mpametsy mihazona Permit B Processor Tier B, manana adidy maro kokoa ianao izay mihatra amin'ny fiarovana ankapobeny ny fananana. Azonao atao ny manamarina fa ny fananana dia manana rafitra fanaraha-maso ampy izay mirakitra, manara-maso ary mifehy ny faritra mba hisorohana ny fanararaotana, fanaingoana na fihetsika tsy ara-dalàna hafa mifandraika amin'ny alikaola.
Raha te-ho mpanamboatra cannabis ianao, dia hampahafantatra ny mombamomba ny cannabis amin'ny mpividy ny cannabis. Zava-dehibe indrindra io fitsipika io satria ny mpividy dia tsy maintsy manana ny ilaina rehetra ilaina alohan'ny mividy cannabis. Ny departemanta dia mifehy ny hetsika fampahafantarana ho ampahany amin'ny fividianana ny vatan-jaza.
Inona avy ny zoko ananako amin'ny maha-mpamokatra rongony
Ny zo lehibe izay anananao amin'ny alàlan'ny mpanazatra rongony dia ny fahaizana mametraka rongony ho ampahany amin'ny fahazoan-dàlana anao. Ilaina ny mangataka fahazoan-dàlana alohan'ny hanombohana orinasa manana cannabis satria mitaky ny hahazoana ireo fahazoan-dàlana hiasa ara-dalàna cannabis.
Any Pennsylvania, ny departemanta dia mety hamoaka fahazoan-dàlana ho an'ny mpamily vitsivitsy voafetra. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ireo olondrafitra 25 ihany no nanolotra ireo tompon'andraikitra isan-taona. Indraindray mihena ny isa indraindray, arakaraka ny isan'ireo mpangataka sy ny fandaminana ankapobeny ny rafitra.